Fitsipika momba ny fiainana manokana - Support COVID VT
Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia namboarina mba hanompo bebe kokoa ireo izay miahiahy amin'ny fomba fampiasana ny 'Fampahalalana azo fantarina momba ny tena' (PII) amin'ny Internet.
PII, araka ny voafaritry ny lalàna momba ny tsiambaratelo amerikana sy ny fiarovana ny fampahalalana, dia fampahalalana izay azo ampiasaina samirery na miaraka amin'ny fampahalalana hafa hahafantarana, hifandraisana, na hitadiavana olona tokan-tena, na hamantarana olona iray ao anaty toe-javatra. Azafady mba vakio tsara ny politikanay momba ny tsiambaratelo mba hahazoana fahatakarana mazava amin'ny fomba fanangonana, fampiasàna, fiarovana na fikirakirana ny PII mifanaraka amin'ny tranokalanay.
Inona avy ireo mombamomba anay angoninay avy amin'ireo olona mitsidika ny bilaoginay, tranokalanay, rindrambaiko na mampiasa ny endri-tsoratanay?
Rehefa mahazo fampahalalana sasantsasany amin'ny tranokalanay ianao, raha ilaina dia mety angatahina aminao hiditra ny adiresy mailakao na ny antsipiriany hafa mety hahafantarana anao manokana, toy ny anarana, adiresy, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, hanampy anao amin'ny zavatra niainanao.
Ity tranonkala ity dia mampiasa Tidio, sehatra fifampiresahana izay mampifandray ireo mpampiasa amin'ireo mpanolo-tsaina ao amin'ny COVID Support VT. Manangona adiresy / anarana / nomeraon-telefaona fotsiny izahay raha mahazo alalana avy amin'ny mpampiasa, hanombohana ny resaka. Ireo hafatra sy angon-drakitra ifanakalozana dia voatahiry vetivety ao anatin'ny fampiharana Tidio ary voafafa raha vao vita ny resaka. Raha mila fanazavana fanampiny, azafady mba jereo ny Politikan'izy ireo momba ny fiainana manokana: tidio.com/privacy-policy. COVID Support VT dia tsy mampiasa ireo hafatra na angona ireo fa tsy hanaraka ny fitadiavan'ny mpampiasa fanampiana. Ny angona anao manokana dia hozahana sy halefa mifanaraka amin'ny General Data Protection Regulation (GDPR).
Manangona vaovao avy aminao izahay rehefa misoratra amin'ny newsletter ianao, mampiditra fampahalalana amin'ny tranokalanay, na avy amin'ny mailaka, lahatsoratra na hafatra elektronika misy eo aminao sy ny tranokalanay. Azonay atao ihany koa ny manangona vaovao avy aminao rehefa mandeha mamaky ny tranokala izay mety misy ny antsipirian'ny fampiasana, ny adiresy IP, ary ny angona nangonina tamin'ny alàlan'ny cookies.
Azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana angoninay avy aminao rehefa misoratra anarana amin'ny alàlan'ny gazetinay izahay, mamaly ny fanadihadiana na fifandraisana amin'ny marketing, mivezivezy amin'ny tranokala, na mampiasa fampiasa amin'ny tranonkala sasany amin'ireto fomba manaraka ireto:
Mangataka naoty na hevitra momba ny serivisy na tranokala ity
Hanaraka anao aorian'ny fifanoratana (chat mivantana, mailaka na fanontanina an-tariby)
Hanolotra anao ny tranokalanay sy ny atiny aminao.
Mba hanatanterahana tanjona hafa omenao azy.
Mba hampandrenesana anao ny fiovana rehetra amin'ny tranokalanay na misy vokatra na serivisy atolotray na omena azy io.
Amin'ny fomba hafa mety hanazavana anao izahay rehefa manome ny vaovao ianao.
Ho an'ny tanjona hafa amin'ny alalanao.
Ny mombamomba anao dia voatahiry ao ambadiky ny tamba-jotra azo antoka ary olona voafetra ihany no afaka miditra amin'izany rafitra izany ary takiana izy ireo hitandrina ny tsiambaratelo.
Manatanteraka fepetra fiarovana marobe isika rehefa misy mpampiasa mandefa, mametraka, na mahazo ny fampahalalana azy ireo mba hitazonana ny fiarovana ny mombamomba anao manokana.
Mampalahelo fa tsy azo antoka tanteraka ny fampitana vaovao amin'ny alàlan'ny Internet. Na dia manao izay fara herinay hiarovana ny mombamomba anao manokana aza izahay dia tsy afaka miantoka ny fiarovana ny mombamomba anao izay ampitaina amin'ny tranonkalantsika. Mety hampidi-doza anao ny fampitana ny mombamomba anao. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fanodikodinana ny toerana miafina na ny fepetra fiarovana eto amin'ity tranonkala ity izahay.
Mampiasa Cookies ve isika?
Ie. Cookies dia rakitra kely izay ampitain'ny tranonkala na ny mpamatsy tolotra azy amin'ny kapila mafy ataon'ny solosainao amin'ny alàlan'ny tranokalanao (raha avelanao) ahafahan'ny rafi-tranonkala na ny mpanome serivisy hahafantatra ny fitaovanao ary hahazo sy hahatadidy fampahalalana sasany. Ohatra, mampiasa cookies izahay hanampiana anay hahatakatra ny safidinao mifototra amin'ny hetsika taloha na ankehitriny, izay ahafahanay manome serivisy nohatsarainao. Mampiasa cookies ihany koa izahay hanampiana anay amin'ny fanangonana angona angon-drakitra momba ny fifamoivoizana an-tranonkala sy ny fifandraisan'ny tranonkala mba hahafahanay manolotra traikefa sy fitaovana tsara kokoa amin'ny ho avy.
Mampiasa Cookies izahay mba:
Mahafantatra sy mitahiry ny safidin'ny mpampiasa amin'ny fitsidihana manaraka.
Araho hatrany ny dokam-barotra.
Manambatra angon-drakitra momba ny fifamoivoizana amin'ny tranokala sy ny fifaneraserana amin'ny toerana, mba hanoloranao traikefa sy fitaovana tsara kokoa amin'ny ho avy. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa serivisy fahatelo natokisana izay manara-maso izany vaovao izany ho anay.
Azonao atao ny misafidy ny hampitandrina anao ny solosainao isaky ny andefasana cookie iray, na azonao atao ny misafidy ny hamono ny cookies rehetra. Izany dia ataonao amin'ny alàlan'ny fikirakirana. Satria samy hafa kely ny browser tsirairay dia zahao ny Menu Fanampiana an'ny mpitety tranonao hianaranao ny fomba marina hanovana ny cookies-nao.
Raha vonoinao ny cookies dia tsy hisy fiantraikany amin'ny zavatra niainanao izany.
Izahay dia tsy mivarotra, mivarotra, na mamindra amin'ny PII any ivelany.
Azonay atao ny mampahafantatra ny mombamomba anao izay angoninay na omenao araka ny voalaza ao amin'ity politika momba ny fiainana manokana ity:
Ho an'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa aminay.
Ho an'ireo mpandraharaha, mpanome tolotra ary antoko fahatelo ampiasainay hanohanana ny fikambananay.
Ho an'ny tanjona hafa ambaranay rehefa manome ny vaovao ianao.
Mankato ny didim-pitsarana, lalàna na fizotry ny lalàna, anisan'izany ny famaliana ny fangatahana governemanta na lalàna.
Mba hampiharana na hampiharana ny fampiasa sy ny fifanarahana hafa.
Mampiseho serivisy antoko fahatelo maro izahay amin'ny tranokalanay. Ireo vohikalan'ny antoko fahatelo ireo dia manana politika manokana sy tsy miankina. Tsy manana andraikitra na tompon'andraikitra amin'ireo atiny sy tranonkala izahay. Na eo aza izany, mitady ny hiaro ny tsy fivadihan'ny tranonkalantsika izahay ary mandray izay hevitra momba ireo tranonkala hafa.
Izahay, miaraka amin'ireo mpivarotra ankolafy toa an'i Google, dia mampiasa cookies an'ny antoko voalohany (toy ny cookies Google Analytics) ary cookies avy amin'ny antoko fahatelo (toy ny cookie DoubleClick) na mpamaritra antoko fahatelo hafa miaraka hanangonana angona momba ny fifandraisan'ny mpampiasa miaraka amin'ny fahatsapana doka sy asa fanompoana serivisy hafa satria mifandraika amin'ny tranokalanay.
Ireo mpampiasa dia afaka miala amin'ny fampahalalana fampahalalana ho an'ny dokambarotra avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny fametrahana ny safidinao amin'ny fomba dokambarotra Google aminao amin'ny alàlan'ny pejy Google Ads Settings. Raha tsy izany, afaka miala ianao amin'ny fitsidihana ny pejy Advertising Advertising Initiative Opt Out na amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Google Analytics Opt Out Browser manampy.
Fitsipika momba ny fiarovana ny fiainana manokana any California (CalOPPA)
CalOPPA no lalàna mifehy ny fanjakana voalohany any Etazonia mitaky tranokala ara-barotra sy serivisy an-tserasera hamoaka politika momba ny tsiambaratelo. Mihoatra lavitra an'i California ny tratry ny lalàna mba hitakiana olona na orinasa any Etazonia (ary azo eritreretina izao tontolo izao) izay miasa amin'ny tranokala manangona PII avy amin'ny mpanjifa any California hametraka politika miavaka momba ny tsiambaratelo hita ao amin'ny tranonkalany milaza ny tena angona nangonina sy ireo olona ireo na orinasa ifampizarana izany. Afaka mahita bebe kokoa ianao Eto.
Vantany vao noforonina ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia hanampy rohy mankamin'izany ao amin'ny pejin-tranonay izahay.
Ny rohy Politikanay momba ny tsiambaratelo dia misy ny teny hoe 'Privacy' ary mora hita ao amin'ny pejy fandraisana.
Hampandrenesina anao ny fiovan'ny Politika momba ny tsiambaratelo ao amin'ny pejinay momba ny tsiambaratelo ary afaka manova ny mombamomba anao amin'ny fifandraisana aminay.
Manaja ny fambara Do Not Track izahay ary tsy manara-dia, mamboly cookies, na mampiasa dokam-barotra rehefa misy ny fanaovan-tserasera Do Not Track (DNT).
Ie. Avelantsika hanaraka ny fitondran-tena avy amin'ny antoko fahatelo izahay.
Ny lalàna momba ny fiarovana ny fiainana manokana amin'ny Internet an-tserasera (COPPA)
Raha mikasika ny fanangonana fampahalalana manokana avy amin'ny ankizy latsaky ny 13 taona dia mametraka ny ray aman-dreny amin'ny fibaikoana ny lalàna momba ny fiarovana an-tserasera ny ankizy (COPPA). Ny Vaomieran'ny varotra federaly, maso ivoho miaro ny mpanjifa any Etazonia, dia mampihatra ny COPPA Rule, izay manoritsoritra izay tokony hataon'ny mpandraharaha tranokala sy serivisy an-tserasera mba hiarovana ny fiainana manokana sy fiarovana ny ankizy amin'ny Internet.
Raha te-hifanaraka amin'ny fampiharana ara-pahalalana ara-pahalalana isika dia handray ity fepetra manaraka ity raha toa ka misy ny fandikana data:
Hampandre anao izahay amin'ny alàlan'ny mailaka ao anatin'ny 7 andro fiasana.
Mandefasa fampahalalana, mamaly amin'ny fanontaniana, sy / na fangatahana na fanontaniana hafa.
Mandefasa vaovao sy fanavaozana.
Tsena amin'ny lisitry ny mailaka mailaka na manohy mandefa mailaka amin'ny mpanjifantsika taorian'ny nitrangan'ny tranga tany am-piandohana.
Mba hifanaraka amin'ny CAN-SPAM dia manaiky ireto manaraka ireto isika:
Aza mampiasa adihevitra diso na mamitaka na adiresy mailaka.
Ampahafantaro ny hafatra ho toy ny dokam-barotra amin'ny fomba mahasoa.
Ampidiro ny adiresy ara-bakitenin'ny orinasanay na ny foibenay.
Manara-maso ireo tolotra mailaka amin'ny adiresy mailaka hafa ho an'ny fanarahan-dalàna, raha ampiasaina.
Ny fanomezam-boninahitra dia manaisotra haingana ny fangatahana.
Avelao ny mpampiasa hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny rohy any amin'ny farany ambany amin'ny mailaka.
Raha te-hiala amin'ny fandraisana mailaka ho avy ianao amin'ny fotoana rehetra, dia azonao atao ny manaraka ny torolàlana eo amin'ny farany ambanin'ny mailaka tsirairay, na azonao atao Mifandraisa aminay ary hesorinay haingana avy eo amin'ny fifanarahana REHETRA.
Politikanay ny mandefa izay fanovana ataontsika amin'ny politikantsika manokana amin'ity pejy ity miaraka amin'ny fampandrenesana fa nohavaozina tao amin'ny pejy fandraisana an'ity tranonkala ity ny politika momba ny fiainana manokana. Raha manova ny fomba fihevitray ny mombamomba ny mpampiasa anay izahay dia hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny mailaka izahay na amin'ny alàlan'ny fampandrenesana ao amin'ny pejin-tranonkala. Ny daty hamaritana ny politika momba ny tsiambaratelo eo an-tampon'ny pejy. Tompon'andraikitra amin'ny fiantohana fa manana adiresy mailaka vaovao sy azo alefa ho anao izahay, ary mitsidika tsindraindray ny tranokalanay sy ity politika momba ny tsiambaratelo ity hijerena ireo fiovana rehetra.
Mpiara-miasa Vermont Care
Adiresy: 137 Elm Street